Pidurangala Rock ~ Journey-Assist - Manakaiky an'i Sigiriya
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Fampahavian'i Sri Lanka » Pidurangala Rock
3 Janoary, 2020
Vato an'ny Pidurangala. Fampahalalana fohy
Tantara kely. Name Meaning
Ahoana ny fomba mankany Pidurangala
Toerana eo amin'ny hantsana
Vatolampy Pidurangala ao amin'ny sarintany
Pidurangala Rock: Famintinana iray
Any amin'ny halavirana 1 km miala an'i Sigiriya fanta-daza no misy vatolampy iray antsoina hoe Pidurangala. Ny haavony dia 170 m.
Tsy mbola fantatra hatreto ny mpizahatany mahazatra, fa tsy midika akory izany hoe tsy mahaliana ilay zavatra.
Rehefa miakatra, misy zavatra hita. Ny faritra, izay misokatra avy any ambony, dia talanjona amin'ny hakantony.
Fijery Sigiriya avy any an-tampon'ny Pidurangaly
Io Sigiriya io ihany dia hita mazava avy any Piduranagaly, raha ny valalaben'ireo mpizahatany amin'ny vatolampy faharoa dia tsy hita, tsy toy ny voalohany.
Miakatra indrindra eo an-toerana izany. Betsaka ny mpizahatany eto.
Tantara kely. Inona no dikan'ilay teny hoe "Pidurangala"
Ny anarana hoe "Pidurangala" ao Sinhala dia midika hoe "Vatosoa volamena omena".
Azo inoana fa izany dia vokatry ny fifindran'ny faritany ity ho fanomezana ho an'ny vondrom-piarahamonin'ny Bodista nataon'ny mpitondra ny fanjakana taloha Sigiriya, izay i Kassap I.
Misy dikan-teny amin'ny 5 sotrokely. n. f. noho ny firosoany, dia nisy monasitera iray an'ny Pidurangal. Ary talohan'izay dia tsy nisy afa-tsy tanànan'ny moanina.
Izay azo jerena eny an-dalana eo an-tampon'ny Pidurangaly
Ny monasihan'ny zohy any Pidurangaly dia hita eo am-poton'ny hantsana. Ity no sehatra faharoa avy amin'ny fidirana. Amin'ny tranokala voalohany dia misy tranobe birao kely izay hividiananao tapakila fidirana. (Ny vidin'ny taona 2019 dia 500 rupee (3,5 dolara).
Ity monasitera ity dia nahita ny endriny ankehitriny tamin'ny taonjato faha-19. Ny rindrina dia hoso-doko amin'ny frescoes, mitovy amin'ny morontsirak'i Sigiriya.
Fidirana mankamin'ny tempolin'ny lava-bato any Pidurangala
Fahatsiarovana ny sarivongan'i Buddha ao amin'ny Tempolin'i Cave Pidurangala
Eo am-pototry ny monasitera ny fanombohan'ny fiakarana mankany anaty vatolampy. Voalohany ny tohatra vato iray, narahin'ny lalana iray izay manakaiky ny antsasaky ny vatolampy manaraka azy. Teny amoron-dàlana dia misy vatolampy be dia be ao anaty fanjakana iray feno fahasosorana. Ireo no efa rava ny trano taloha teo amin'ny moanina.
Ireo sela mpitazona tranainy dia mankeny an-tampon'ny vato Pidurangala
Ny dingana mankany amin'ny farany dia ao anaty fanjakana sahirana, saingy mbola mahavita mitondra ny asany lehibe.
Iray amin'ny sidina amin'ny tohatra mankany an-tampony
Sary sokitra biriky lehibe iray momba ny Buddha reclining
Ny eo akaikin'ny tampony no tena mahasarika an'i Pidurangaly: sary sokitra lehibe iray an'ny Buddha mihoa-peo. Ny lamba amin'ity sokitra ity dia biriky. Eo amin'ilay sarivongana dia apetaka multilayer.
Mahatsiaro an'i Buddha amin'ny lalana mankany an-tampon'ny Pidurangala Rock
Akaiky an-tsokosoko ny Buddha. Mila mandeha kely eo amin'ilay lalana ianao, ary avy eo miakatra amin'ireo vato lehibe miely miparitaka tampoka.
Ny tampon'ny Pidurangaly dia lemaka lemaka, misy endrika telozoro ary endrika refy mahavariana raha oharina amin'ny haben'ny kianja filalaovana baolina kitra.
Misy vato lehibe voariva eo amin'ilay lembalemba, izay tsy fantatra ny tantarany amin'ny lembalemba.
Boulder eo amin'ny hantsana Pidurangala
Tsara homarihina fa avy amin'ity takelaka ity misy takelaka mahafinaritra manakaiky ny manodidina avy amin'ny lafiny rehetra, anisan'izany i Sigiriya.
Pidurangala dia mora idirana amin'ny toerana rehetra ao Sri Lanka na amin'ny fitaterana tsy miankina na amin'ny fitateram-bahoaka.
Avy any Hikkaduwa, Bentota, Unawatuna ary tanàna hafa any atsimon'ny firenena, aleo mandeha lamasinina aloha. Ny fandaharam-potoanan'ny lamasinina dia azo jerena ao amin'ny tranokalan'ny lalamby any Sri Lanka na ao amin'ny aplé finday amin'ny fandaharam-potoanan'ny Train.
Avy any Hikkaduwa ka hatrany Pidurangaly dia azo jerena toy izao manaraka izao:
Fiaran-dalamby Hikkaduwa - Colombo Fort (dia 3 ora). Colombo Fort dia toerana iray any Colombo.
Fiaran-dalamby ao Colombo Fort - Kandy (mandany 3 ora) koa.
Bus Kandy - Dambulla (dia 2,5 ora). Ity fiara fitateram-bahoaka ity dia mandeha isan'andro amin'ny 5 ka hatramin'ny 19 ora isaky ny 40 minitra. Ny toerana misy ny fiara fitateram-bahoaka any Kandy dia tena akaikin'ny gara.
Bus Dambulla - Sigiriya (dia 40 minitra). Izy koa dia mandeha isan'andro 5 ka hatramin'ny 19 ora miaraka amin'ny 20 minitra.
Tuk-tuk Sigiriya - Pidurangala (maharitra 10 minitra). Handeha 200 rupees ny dia. Afaka mandeha an-tongotra ihany anefa ianao. 3 km fotsiny ny elanelan'ny.
Tsy misy dikany ny mividy tapakila amin'ny lamasinina amin'ireo toerana ireo. Azo amidy mora foana izy ireo alohan'ny mialoha ny dia. Ny tapakilan'ny bus no novidiana mivantana amin'ny bus Mba hahitana ny fiara izay ilainao dia mila manontany ireo mpitantana amina gara ianao, ohatra, "Sigiriya?" Dia hanondro amin'ny rantsantanana iray izy io.
Ao anaty fiara fitaterana kosa dia tsara tokony hanazava tsara indray ny lalan'ny mpandeha. Matetika, ny mpitory ny tenany dia milaza aminao hoe aiza no alehanao, fa afaka manontany azy ianao raha mbola lavitra ilay fijanonanao.
Raha mankany Pidurangala avy any Sigiriya ianao, mandalo ny kompleks Sigiriya amin'ny ankavanana, tsy maintsy mamakivaky ala anaty ala ianao, ary rehefa mandehandeha miankavia ianao dia hahita otrika manodidina ny trano mimanda.
Vidiny, fomba fiasa
Vola fidirana - 500 rupees.
Misokatra isan'andro ny fidirana. from 5.00 to 17.00.
Ny fiakarana manontolo mankany an-tampon'ny Pidurangaly dia 30 minitra. Ary avy eo, raha tsy maika ny hitondrana azy ary maka sary be dia be.
Tohatra iray manodidina ny 500 eo ho eo no mankany amin'ny farany ambony. Ny dingana dia efa eo antenatenan-taona, potika ny ampahany, fa mbola mety ho atsangana.
Ny fiakarana ho azy dia tsy azo antsoina hoe mavesatra, fa indraindray misy dingana mivaingana. Tsy maintsy mivelatra tsara ianao eo alohan'ny tampony, satria efa tsy eo ny dingana.
Mitranga izany dia mila mitsambikina avy amin'ny vato iray ianao. Tsiahivina fa ho salama tsara ara-batana amin'ity.
Tokony hitafy ny kiraro fanatanjahantena ianao, maka crème ho fiarovana ny masoandro, solomaso maizina ary zavatra hanarona ny lohanao.
Eo akaikin'ny monasitera dia misy trano kely iray misy rano fisotro mangatsiaka sy sakafo kely.
Miomàna hiatrika ny zava-misy fa eny an-dalana dia hisy ankizy eo an-toerana izay hangataka, fa tsy menatra manokana.
Hotely akaikin'ny Pidurangala Cliffs
Toerana akaikin'ny hantsana. Azo tanterahina sy lavitra an'izany!
Parkina eo an-tongotra no. Ampy izany ho an'ny fiara sy ny bisikileta.
Fotoana hitsidihana: 5.00 - 17.00. isan'andro
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https: //goo.gl/maps/1S4EgfvzqCzEBvP76
Ny hevitra momba ny Pidurangala Rock
Hevitra momba ny Pidurangala Rock (valin'ny Google)
Pidurangala Rock Reviews (Tripadvisor)
"Vatosoa Photographic" :))) Afftar zhzhot!
Tsara ny famerenana!
Tsy ratsy kokoa noho ny Sigiriya tsy voarindra. Avy amin'ny fanampiny tsy miova, dia matetika olona vitsy kokoa. Lehibe ny fomba fijery avy any ambony. Ary ny fiakarana dia mampahatahotra anao, ary mahafinaritra ny hahatsapa amin'ity tontolo voadio ity, nogadraina ho an'ny zazakely, ny fahitana 🙂
Tonga tao anaty bisikileta izahay. Reraka any amin'ny helo taorian'ny lalambe lavitra). Izy ireo dia natao an-tsokosoko tamin'ny flip flop mahazatra. Ka rehefa nanakaiky ny fidirana tao Pidurangala izy ireo dia nisy vahiny marary marim-pototra nilaza taminay fa tsy mitafy akanjo izahay ary ho sarotra na tsy azo atao ny miakatra any ambony any anaty kiraro toy izany.
Eny ary, tsy nisy na inona na inona, aorian'ny 20 minitra, dia niara-nisakafo ato an-tampon'ny katsaka novidiana tany Polonnaruwa :).
Salama be ilay toerana. Tsara tarehy ireo panneana. Miala tsiny fa tsy afaka manampy sary ianao amin'ilay hevitra
Tamin'izany no nahitan'izy ireo ny fomba nipoiran'ny vehivavy antitra iray (avy any an-toerana). Ary firy ny tovolahy tanora teo an-toerana nanampy azy. Mahagaga ny fomba ifandraisan'izy ireo amin'izany. Mihintal dia nahita toy izany ihany. Ny vehivavy taloha dia mirona hiditra ao amin'ireny toerana masina any ambanin'ny lanitra ireny. Ary ny tanora dia tsy manadino foana ny manampy.
Amin'ny ankapobeny. Tena mendrika tokoa io toerana io. Hisy zavatra maro mahaliana ao an-dàlana. Mandainga biriky Buddha, sela mpitaiza .. ny tempoly eo an-tongotra miaraka amin'ny frescoes, sy ny sisa.
Eny an-tampon'i Pidurangaly, eny an-dàlana, misy ihany koa ny oasis kely eo afovoan'ny vatolampy. Eny, ny alika mipetraka ao 🙂
Mahaliana ilay toerana. Manoro hevitra aho hitsidika anao. Ary in-8 mahery no vidiny noho ny Sigiriya!
Ireo lesoka ... Ireo ankizy eo an-toerana dia mihazakazaka mifanety sy miangavy